Vaovao - lakilen'ny famolavolana ny vokatra elektronika ho an'ny mpanjifa
Ny vokatra elektronika ho an'ny mpanjifa dia manondro ireo vokatra elektronika izay natao manodidina ny fampiharana an'ny mpanjifa ary mifandray akaiky amin'ny fiainana, asa ary fialamboly. Ny tanjon'ny vokatra elektronika toy izany dia ny ahafahan'ny mpanjifa misafidy malalaka, mampiasa ary mankafy.
Miaraka amin'ny fampandrosoana sy fanatsarana hatrany ny tsenan'ny vokatra elektronika mpanjifa, dia miha mahery vaika ny fifaninanana eo amin'ny tsenan'ny vokatra elektronika. Ny tsena dia manana fepetra avo lenta amin'ny famolavolana, ny teknolojia fototra, ny fitaovana ary ny fisehoan'ny vokatra vaovao.
Ny maodely fisainana marina momba ny famolavolana vokatra elektronika mpanjifa dia tokony CMF. Ka inona marina ny CMF? CMF no santatry ny loko, ara-nofo ary ny famaranana. Famintinana tsotra ireo lafiny telo amin'ny lokon'ny vokatra, ny fitaovana ary ny fitsaboana amin'ny tany. Ny famolavolana CMF dia mihetsika amin'ny volavola famolavolana, ary mampifandray sy mifanerasera amin'ny ampahany lalina amin'ny fahatsapana ny zavatra famolavolana sy ny mpampiasa. Ampiasaina matetika amin'ny famolavolana vokatra hiatrehana ny antsipirian'ny zavatra famolavolana toy ny loko, fitaovana ary fanodinana. Izy io dia singa iray manan-danja amin'ny famolavolana vokatra.
Nandritra ny fotoana lava, ny teknikan'ny famolavolana ny vokatra elektronika mpanjifa dia notanterahina tsikelikely mifanaraka amin'ny fisainana nentim-paharazana. Matetika ny mpamorona dia manaraka an'io fizotry ny famolavolana io: ny famoronana vokatra - sketsa - maodely - modely prototype. Amin'ny dingana toy izany dia mila mieritreritra mafy ny mpamorona ary miasa mandroso sy miverina.
Rehefa mamolavola vokatra iray dia matetika ny fijerin'ny mpamorona ny fisehon'ilay vokatra, saingy matetika no hitan'ny mpamorona fa rehefa vita ny vokatra dia tsy misy dingana mifanaraka na fanohanana ara-materialy, na tsy misy loko mifanaraka amin'ny toetran'ny vokatra. Ireo lafin-javatra ireo ivelan'ny fampidirana ny vokatra manelingelina ny fanaovana ny vokatra tonga lafatra antenaina.
Amin'izao fotoana izao dia mpamorona maro no mbola hampiasa ity teknika famolavolana nentim-paharazana ity. Na izany aza, io fanovana fanamorana io dia nahatonga ny fahasamihafan'ny vokatra ho lasa kely kokoa ary ny fomba fanakanana ny endrika avy amin'ny fomba fijerin'ny CMF dia lasa fomba fisainana endrika ho an'ireo elektronika mpanjifa ankehitriny. Eto amin'ny Emate, ny ekipa mpamolavola antsika dia miara-miasa akaiky amin'ny departemantan'ny injenierantsika miaraka amin'ny bobongolo miasa CMF. Amin'ity fiaraha-miasa akaiky ity dia afaka manangana maodely vaovao amin'ny fomba mahomby isika. Ireto misy modely vitsivitsy noforoninay.